Takelaka fampitomboana ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
TMiresaka momba ny fampitomboana. Azo atao izany Mianara mora kokoa noho ny eritreritrao. Ny zava-drehetra dia resaka fahafantarana azy ireo, mamerina azy ireo ary mitadidy azy ireo ary hijanona miaraka aminao mandritra ny androm-piainanao izy ireo. Ataovy!
Hadisoana: mety tsy misy ny fijery d0241853ho
La Latabatra fampitomboana zavatra izay hampiasainao imbetsaka mandritra ny fiainanao io. Tsy hohadinoinao mihitsy raha mianatra hatramin'ny fahazazanao ianao. Raha averintsika tsy tapaka ny tabilao tsirairay, afaka ora vitsivitsy dia ho azonao atao ny manamarina fa efa mahafehy ny isa rehetra ianao mba hampitombo.
Mianatra ny latabatra ve ianao? Manoro ny lahatsoratray izahay: ny fomba hianarana latabatra fampitomboana. Tsarovy izany latabatra fampitomboana 1 ka hatramin'ny 10 tena ilaina amin'ny matematika izy ireo. Raha tsy mahafehy haingana azy ireo ianao dia hanana olana amin'ny ho avy rehefa manao kajy tsotra. Aza matahotra anefa! Manome toky anao izahay fa mora kokoa noho ny eritreretinao izany. Ohatra, mahaliana anao ny mahatakatra fa ny 3 x 4 dia 12. Midika izany fa miverimberina in-3 ny 4, azontsika atao ihany koa ny milaza fa miverimberina in-4 ny 3, mitovy ihany izany.
Na dia mahaliana aza mahatakatra ny fiasan'ny fampitomboanaAmin'ny fiainanao manokana dia ny fahatsiarovanao no hitadidy ny valin'ny fampitomboana tsirairay avy hatrany.
1 Takelaka fampitomboana hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 10
2 Inona avy ireo latabatra fampitomboana?
2.1 Inona no tombony azo avy amin'ny latabatra fampitomboana?
3 Ahoana ny fomba hianarana ireo latabatra fampitomboana?
4 Ny latabatra 1
5 Ny latabatra 2
6 Ny latabatra 3
7 Ny latabatra 4
8 Ny latabatra 5
9 Ny latabatra 6
10 Ny latabatra 7
11 Ny latabatra 8
12 Ny latabatra 9
13 Ny latabatra 10
Takelaka fampitomboana hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 10
ny latabatra fampitomboana dia ilaina, mandritra ny fiainantsika dia hahita toe-javatra misy isika tsy maintsy fantatsika sy hofehezintsika izy ireo mora be. Ny toe-javatra mahazatra indrindra ahafahantsika mahita azy ireo dia:
• Mila mividy tapakila 10 ho an'ny hetsika iray ho an'ny fianakavianao iray manontolo ary mila fantatrao haingana ny vidin'ny rehetra. Ny mety iray dia ny manampy tsirairay ny fampidirana tsirairay, ary ny fahafaha-manao iray hafa hampiasaina la Latabatra 10 izany dia hanome antsika ny vahaolana eo noho eo.
• Toe-javatra iray hafa mety ho ny fahalalana ohatrinona ny lasantsy ilaintsika mankany amin'ny toerana iray, raha fantatsika izay lanin'ny fiaranay isaky ny 5 kilometatra. Amin'ity tranga ity dia azontsika ampiasaina la Latabatra 5 ho safidy tsara indrindra.
• Saber firy ny zavatra ao anaty boaty maro raha fantatsika hoe firy ny singa ao aminy tsirairay.
• Fantaro ny vidin'ny zavatra marobe raha fantatsika hoe ohatrinona ny vidiny.
• Fantaro ny vidin'ny atody am-polony raha fantatsika fa mendrika ny iray amin'izy ireo.
• Raha manana orinasa ianao ary manana mpiasa 2000 izay handraisan'ny rehetra karama mitovy, dia ny fampitomboana tsotra dia afaka manampy anao hahafantatra hoe ohatrinona ny vola tokony aloa amin'ny mpiasa rehetra ao amin'ny orinasanao. Fandidiana mahazatra azy ireo izany.
Ho an'ity rehetra ity ary bebe kokoa dia ilaina ny fahalalana tanteraka ny latabatra fampitomboanaTsara ihany koa ny mahafantatra ny tombontsoa azo avy amin'ny fandalinana ny latabatra fampitomboana. Araka ny hitantsika, ireo toe-javatra izay alehantsika mila latabatra fampitomboana dia fahita mahazatra ary isan-karazany koa, ary izany no mahatonga ny fifehezana azy ireo sy ny fahafantarana azy ireo lalina dia saika adidy amin'ny fiainantsika.
Inona avy ireo latabatra fampitomboana?
Ny famoronana ny latabatra fampitomboana dia natolotry ny filozofa sy matematika Pythagore. Tamin'ny fahiratan-tsaina goavambe dia vitany ny naka sary an-tsaina ireo asa matematika ireo, na dia ny sekoly Pythagorean aza no nahavita azy ireo taty aoriana.
Ireo latabatra fampitomboana revolisiona tena izy ireo tamin'ny androny, satria misaotra amin'izy ireo dia azo atao ny miasa matematika lehibe nefa tsy mila manampy isa imbetsaka.
Nandritra ny taona maro, ny karazana latabatra sy ny tohiny rehetra dia noforonina, ny tabilao sasany dia tarehimarika 3 hatramin'ny 0 ka hatramin'ny 999, saingy tsy nahomby tamin'ny latabatra fototra 0 ka hatramin'ny 10 izy ireo.
Ao amin'ny 1642 Blaise Pascal dia namorona kajy mandeha ho azy izay ny rubric ho an'ireo asa matematika ireo.
Ny latabatra fampitomboana voalohany, misy latabatra Cartesian (na Latabatra Pythagorean ) izay misy ny fampiraisana ny boaty tsirairay amin'ny iray hafa.
Inona no tombony azo avy amin'ny latabatra fampitomboana?
• Afaka nanao ny asany mividy sy mivarotra haingana kokoa ireo mpivarotra.
• Ireo mpahay toekarena sy mpamory hetra tamin'izany fotoana izany dia afaka nanao asa lehibe tao anatin'ny fotoana fohy.
• Ny mponina dia afaka manao asa sarotra kokoa izay elaela no ela.
Araka ny hitantsika, matematika ary manokana ny latabatra fampitomboana, tamin'ny voalohany dia efa nanomboka namokatra ny voalohany izy ireo tombontsoa ho an'ny fiaraha-monina. Tamin'izany fotoana izany, ny fananana fitaovana mahasoa toy izany dia tena fanomezana izay nentin'ny siansa. Androany, tsy azo eritreretina ny ho velona tsy misy latabatra fampitomboana, satria asa an-tapitrisany no atao isan'andro izay ilana an'ireo latabatra ireo.
Ahoana ny fomba hianarana ireo latabatra fampitomboana?
Afaka mahafantatra azy ireo ianao ao anaty adiny 1 daholo!. Raha manontany tena ianao ny fomba hianarana latabatra fampitomboana, manana vaovao tsara izahay, mora be izany amin'ny fikafika ! Manana ny atidoha karazana fahatsiarovana roa: fotoana fohy sy lavitra, ity fika ity dia hahafahanao mianatra azy ireo haingana dia haharitra anao mandrakizay. Hanaraka ireto dingana ireto izahay izay hahatonga ny latabatra ho tena tsotra.
• Dingana voalohany. Andao ho raisina ohatra ny Latabatra in-7. Ary hamaky azy io indray mandeha isika. Aza manahy raha tsy tadidinao daholo, amin'ny voalohany dia ara-dalàna izany, aleo vakiana fotsiny.
• Dingana faharoa. Hosaroninay tapa-taratasy daholo ny vahaolana rehetra, nefa tsy manarona ny fampitomboana dia manarona ny vahaolana toy izao fotsiny izahay:
• Dingana fahatelo. Hanomboka amin'ny voalohany isika ary hiezaka hahafantatra hoe ohatrinona ny 7 × 1, lazainay amin'ny feo avo ny valiny ary ampidino ny taratasy hijerena azy, raha toa ka nahavita tsara ianao dia tohizo ny fampitomboana 7 × 2 manaraka, raha tsy nahomby ianao dia mila mandrakotra vahaolana rehetra ary miverina manomboka.
• Dingana fahaefatra. Raha mahatratra 7 × 2 ianao dia tohizo ny fampidinana tsirairay ny taratasy mandra-pahatongan'ny farany, raha malahelo ianao dia tsy maintsy manarona azy rehetra indray ary manomboka hatrany am-piandohana. Ary toy izany koa ireo latabatra rehetra.
Ity rafitra ity dia mampiasa ny fitadidianao hampitombo ny sainao. Amin'izay dia hanao izay fara heriny ny ati-dohanao mba hahalala ny latabatra fampitomboana ka tsy mila atomboka amin'ny latabatra tsirairay ianao. Izany no mahatonga an'ity rafitra ity ho iray amin'ireo izay heverinay fa mandaitra indrindra. Mandritra izany fotoana izany dia averimberinay hatrany ireo latabatra, ka ho feno kokoa ny fandalinana.
Ny fahatsiarovana maharitra dia iray amin'ireo mahomby indrindra. Ny vokatr'io fanatanjahan-tena io dia ny fijerin'ny ati-doha anao, satria fantany fa raha tsy mahomby ianao dia tsy maintsy miverina amin'ny voalohany indray. Ity dia tsy maintsy ataonao amin'ireo latabatra fampitomboana 10, ary avereno averimberina ilay fomba Manome toky izahay fa afaka adiny 1 dia ho fantatrao daholo!
Ny latabatra 1
Ny latabatra 2
Ny latabatra 3
Ny latabatra 4
Ny latabatra 5
Ny latabatra 6
Ny latabatra 7
Ny latabatra 8
Ny latabatra 9
Ny latabatra 10
Andininy mahaliana momba latabatra fampitomboana :
• Ny latabatra fampitomboana dia fiasa matematika tsotra izay misy fanampiana isa imbetsaka, ohatra 7 × 3 = 21 (midika hoe 7 + 7 + 7 = 21). Operations tena tsotra izy ireo nefa miaraka amin'izay dia tena zava-dehibe amin'ny fiainana izy ireo, satria hampiasainao be dia be izy ireo.
• Zava-dehibe ny fahalalana ny latabatra fampitomboana, ohatra ny fampiasana sasany dia izao: raha mitaky 5 dolara ny voasarimakirana iray ary mividy voasarimakirana 4 aho, ohatrinona no vidin'ny rehetra amiko? Miaraka amin'ny hetsika matematika 5 x 4 = 20, fantatray fa ny 5 dolara x 4 voasarimakirana dia 20 dolara. Hanao an'io asa matematika io im-betsaka mandritra ny androm-piainanao ianao.
• Tokony hofehezintsika tanteraka izy ireo. Zava-dehibe ny fahalalana azy ireo tsara mba hahafahana manana ny vahaolana isaky ny fampitomboana eo noho eo, izany dia hahafahantsika manangona fotoana be dia be miaraka amin'ny kajy mifandraika amin'izany.
• Misy tetika maro mba hahafantarana ireo latabatra fampitomboana, dia atolotray ny lahatsoratra ny fomba hianarana latabatra fampitomboana, fa manazava antsipiriany sasantsasany koa izahay, ohatra: raha fantatsika hoe ohatrinona ny 3 × 4 = 12 dia ho fantatsika koa hoe ohatrinona ny 4 × 3 = 12 dia tadidio fa tsy misy akony amin'ny vahaolana ilay baiko, amin'ity fomba ity 7 × 3 = 21 sy 3 × 7 = 21. Ity fikafika ity dia hanampy anao hampiasa azy amin'ny asa maro.
• Ny fomba tsara sy mahomby indrindra hianarana latabatra fampitomboana, dia ahitana ny famerimberenana matetika ny latabatra tsirairay, izany dia hahatadidy azy ireo mora foana sy mandritra ny androm-piainany.
Fantatrao izao ireo latabatra, tonga ny fotoana ianaro mandritra ny fiainana izy ireo, amin'ity tranokala ity dia manolotra fika fitadidiana izay hanampy anao tsy hanadino azy ireo ary hanana valiny haingana isaky ny mila azy ireo ianao.
Tadidio izany ny tsy fitoviana no lakilen'ny fahombiazana, na dia toa sarotra aza izany, latabatra fampitomboana dia mitaky fotoana kely kely vao ianarana mandrakizay, resaka famerimberenana sy famerenana ny tsirairay amin'izy ireo fotsiny izany, azonay antoka fa afaka iray tolak'andro ianao dia afaka hahatratra ilay tanjona napetranao tao amin'ny fitadidinao mandritra ny androm-piainany.